USimona no-Angela-Thandazela uPapa-ukubala ukuya eBukumkanini
USimona no-Angela-Thandazela uPapa
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela NgoSeptemba 26, 2020:
Ngale njikalanga uMama uvele enxibe ezimhlophe zonke; Ingubo awayeyisongele yayinkulu kwaye iluhlaza okwesibhakabhaka ngombala. Ingubo efanayo yayigqume nentloko yakhe, eyayinesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Umama wayevule iingalo zakhe njengomqondiso wokwamkela. Kwisandla sakhe sasekunene kwakukho irosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, eyayihla iphantse yafika ezinyaweni zakhe ezazize kwaye ziphumle emhlabeni, apho imiboniso yobundlobongela inokubonwa khona. Umama watyibilika ngengubo yakhe kwihlabathi liphela.
Bantwana abathandekayo, ndiyabulela kuba namhlanje nibuyele kwihlathi lam elisikelelekileyo. Bantwana, ndiyanithanda, ndinithanda kakhulu, kwaye ukuba ndilapha kungenxa yokuba ndifuna ukunisindisa nonke. Bantwana bam, amaxesha anzima alindele nina, amaxesha amnyama nabuhlungu, kodwa musani ukoyika. Yolula izandla zakho kum ndikuse kwaye ndikukhokele kwindlela elungileyo. Musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu; ndivulele iintliziyo zenu. Intliziyo yam ivulekile; jonga, ntombi…
Ngeli xesha, uMama undibonise intliziyo yakhe ithwele isithsaba ngameva wathi kum:
Intliziyo yam ihlatyiwe yintlungu ngabo bonke abantwana endibamemileyo ukuba bandilandele, kodwa ngubani, yeha, bandifulathela. Ngena entliziyweni yam!
Ndaqala ukuva intliziyo kaMama iqala ukubetha kakhulu - ingxola nangakumbi.
Bantwana bam, intliziyo yam ibethela wonke umntu, ibetha wonke umntu. Bantwana abancinci, namhlanje ndiyanimema kwakhona ukuba nithandazele iCawe- hayi icawe yonke, kodwa necawa yenu. Thandazani, bantwana bam, thandazani. Bantwana, ukuba ndiselapha kungenxa yenceba kaThixo engenasiphelo: inyanga nenyangaInqaku loMguquleli: oku kucingelwa ukuba kubhekiswa kubo abahambi ngezonqulo abazimaseZaro di Ischia ngomhla we-8 nowama-26 kwinyanga nganye. ufumana umzuzu wobabalo, ongasoloko ulufumana ngovuyo. Bantwana bam, ncedani niqhubeke nokwenza umthandazo iCenacles: kwakhona ndiyakumema ukuba nithandaze iRosari eNgcwele emakhayeni enu. Ncedani, bantwana, qhumisanani amakhaya enu ngomthandazo.
Emva koko uMama wadlula phakathi kwabahambi kwaye wabasikelela.
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona NgoSeptemba 26, 2020:
Ndabona uMama: wayenxibe iimpahla ezimhlophe kwaye ebhinqe ibhanti yegolide esinqeni sakhe, isigqubuthelo esimhlophe esimhlophe nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini entlokweni yakhe. Emagxeni akhe kwakukho ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka eyaya ezinyaweni zakhe, apho wayenxibe iimbadada ezilula zesikhumba. Iinyawo zikamama zaziphumlele emhlabeni. Umama wayevule iingalo zakhe njengomqondiso wokwamkela.
Bantwana bam abathandekayo, ukunibona apha kwihlathi lam elisikelelweyo ngalolu suku sithandwa sam kuzalisa intliziyo yam ngovuyo. Bantwana bam, ndize kuni ngothando olukhulu lukaBawo. Bantwana, ukuba niyayiqonda indlela uthando lukaBawo olukhulu ngayo ngamnye wenu. Bantwana bam, ndihlala ndisondele kuni, ndihamba nani kuwo wonke umzuzu wobomi benu; Ndiyanithanda, bantwana. Thandazani, bantwana bam, thandazani. Bantwana, ndicela kwakhona imithandazo yam malunga neCawe yam endiyithandayo.
Njengoko wayethetha oku, ubuso bukaMama baba buhlungu kwaye kwehla iinyembezi ebusweni bakhe.
Thandazani, bantwana, ukuze [iCawe] ingonganyelwa bububi esele bunwenwele ngaphakathi kwakhe. Thandazela oonyana bam abathandekayo nabakhethiweyo [ababingeleli], thandazela uBawo oyiNgcwele, uVicar kaKristu. Izigqibo zengcwaba zixhomekeke kuye: thandazela ukuba uMoya oyiNgcwele umgcwalise ngalo lonke ufefe kunye neentsikelelo. Thandazani, bantwana bam ukuba okuhle kuya kuhlala kwindawo enkulu ngakumbi kobu buntu, kule mpucuko ibambeke kakhulu kubathengi, ekubonakaleni kunokuba kunjalo, ekufuneni kunokunikela, okuya kugcwele kukuzithemba kwayo naphakade ukude kuThixo. Ndiyanithanda, bantwana bam, ndikunye nani; thandazani, bantwana, thandazani. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
Inqaku loMguquleli: oku kucingelwa ukuba kubhekiswa kubo abahambi ngezonqulo abazimaseZaro di Ischia ngomhla we-8 nowama-26 kwinyanga nganye.
← Kutheni ngoku?
ULuz de Maria - Ukuhluza ingqolowa →